နက်(စ်)ကော်ဖီ - Kanaung News
ဇီးချဉ်ကုန်းဟာ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ပဲ ဇီးချဉ်ပင်တွေ တောထနေတဲ့ ရွာကလေး။ အနီးဆုံးက ကျောင်းစုဆိုတဲ့ တိုက်နယ်အဆင့် ရွာနဲ့ကိုပဲ လေးမိုင်ကျော်ကျော်လောက် ဝေးတယ်။ ရေလည်းရှား၊ နေလည်း ပူ၊ ဖုန်လည်းထူတဲ့ ရွာတစ်ရွာလိုပါပဲ။ သိပ်တော့ မထူးဘူး။ ခေါင်တယ်၊ ဆင်းရဲတယ်၊ အိမ်ခြေနည်းတယ်။ ဇီးချဉ်ကုန်းက လူတွေဟာ ပစ္စည်းပစ္စယလေး ဝယ်ချင်လို့၊ ဥပုသ်သီတင်းလေး ဆောက်တည်ဖို့ မုန့်လေး ပဲလေး၊ စားစရာ သောက်စရာလေး ဝယ်ချင်ရင် ကျောင်းစုကိုပဲ သွားရတယ်။ ရွာမှာက ဈေးရှိတယ်ဆိုရုံကလေးပဲ ရှိတာကိုး။
ဒါပေမဲ့ ရွာမှ ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်း စက်ဘီး ပြင်ဆိုင်ကလေး ရှိတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကလေး တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ ရွာသားတစ်ချိူ့စိုက်တဲ့ ကြံခင်းတွေ ရှိတော့ ကြံရည်ဆိုင်ကလေး တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ နောက် ပျစ်ချွဲချွဲ ချိုဖန်ဖန် အရသာရှိတဲ့ အုတ်နီခဲရောင် လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်တစ်ဖလား ရနိုင်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေး ရှိတယ်။ ရွာအနောက်မှာ အကြော်ဆိုင်ကလေး၊ ထန်းရည်ခါးဆိုင်ကလေး ရှိတယ်။ ဒါပဲ။
ဇီးချဉ်ကုန်းရွာ ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်ဟာ ဆံညှပ်လို့ ရမယ်၊ စက်ဘီးပြင်ချင်ရင် ဖြစ်တယ်၊ ကြံရည်သောက်မယ် ဆိုရင် ငွေနှစ်ကျပ်လောက်နဲ့ ကြိုက်သလောက် သောက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ထန်းရည်ခါးကြိုက်ရင် ကိုလုံး ထန်းတဲကို သွားနိုင်တယ်။ လက်ဖက်ရည်မှ သောက်ချင်ပြီဆိုရင် ကိုအီကွန်းဆိုင်ကို သွားထိုင်ဖို့ပဲ။
အခုပြောချင်တဲ့ ကိစ္စက ကိုအီကွန်း ဆိုင်အကြောင်းပဲ၊ သည့်ထက်ပိုပြီး နည်းနည်းစိတ်ပြောရင် ကိုအီကွန်းဆိုင်ရဲ့ လက်ဖက်ရည်ခုံ ဘယ်ဘက်ထောင့်က ကော်ဖီမှုန့်ထုပ်ကလေး အကြောင်းပဲ။ သည် ကော်ဖီမှုန့်ကလေးကို အီကွန်း ဝယ်ထားတာ ကြာပြီ။ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ ဆိုတာတောင် သူ မမှတ်မိဘူး။ ကြာတော့ကြာပြီ။ ကြာဆို ဇီးချဉ်ကုန်းမှာ ကော်ဖီသောက်တဲ့ သူဟာ ပြောရင်ယုံမလား မသိဘူး။ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲသည်လူ နာမည်က ချန်ထွန်းအောင်လို့ ခေါ်တယ်။ အရပ်ရှည်ကိုင်းကိုင်း၊ နှုတ်ခမ်းပြာပြာ၊ မုတ်ဆိတ်တွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့၊ ကြွတ်ဆတ်ဆတ် မာကျောကျော ရုပ်မျိုး။
သူဟာ မနက်တိုင်း ကိုအီကွန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကို လာလေ့ရှိတယ်။ လာတိုင်းလည်း ကော်ဖီတစ်ခွက် မှာထားလေ့ ရှိတယ်။ ကော်ဖီကို မက်မက်စက်စက်ကြီး ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ချန်ထွန်းအောင်ပဲ။ ကော်ဖီတစ်ကျိူက်ကို အားရပါးရကြီး ကျိုက်ချပြီးရင် ဆင်နှစ်ကောင် ဆေးပေါ့လိပ်ကို အားရပါးရ ဖွာတော့တာပဲ။
ပြီးရင် ကော်ဖီခွက်ထဲမှာ ခပ်မည်းမည်းကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီနှစ်တွေကိုတောင် ရေနွေးနည်းနည်း ထပ်ထည့်ပြီး ကျိုက်ချ၊ ပြီးရင် ဆေးလိပ်ဆက်ဖွာ၊ ပြီးရင် ရေနွေးကြမ်း နှစ်ခွက်လောက် သောက်၊ ပြီးရင် ကြို့တစ်ချက်လောက် ပြင်းပြင်းထိုးပြီးမှ ထပြန်လာတဲ့ လူမျိုးကိုး။ အဲညဘက်မှာတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးက စောစောပိတ်တတ် တော့ ညဦးကတည်းက ကော်ဖီတစ်ခွက်ဝယ်ပြီး မသောက်သေးဘဲ နှပ်ထားတယ်။ အိပ်တော့မယ်ဆိုမှ အေးစက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီကို ကျိုက်ချ အရသာခံပြီးမှ အိပ်တယ်။ ဒါမှလည်း အိပ်ပျော်တယ်။
ခက်တာက ကိုအီကွန်းရဲ့ ဆိုင်ကလေးဟာ ဆိုင်ကြီး ကနားကြီး မဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်တောင် သင်္ဘောဆေးထဲ လက်ညှိုးနှစ်ပြီး သွပ်ပြားပေါ် လက်ညှိုးနဲ့ပဲ ရေးထားတဲ့ ဆိုင်ဘုတ်ကလေးနဲ့ ဆိုင်မျိုးဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ဇီးချဉ်ကုန်းရွာက လူတွေဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။
လက်ဖက်ရည် ယဉ်ကျေးမှုဟာ သူတို့ရွာကလေးနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပက်သက်ဘူး။ အဲသည်အချိန်က လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘာမှမရှိပေမယ့် ဘယ်သူမှ ဟုတ်တိပတ်တိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကျောက်ချထိုင်တာမျိုး မရှိဘူး။ မရှိဘူးဆိုပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောစရာရှိတယ်။ မရှိဘဲနဲ့ ကိုအီကွန်း ဘယ်သူ့ကို ရောင်းနေသလဲ။ မနက်ဘက် ဈေးဖွင့်ကလေးမှာ ခဏတဖြုတ် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မြင်းလှည်းဆရာတွေ သောက်တယ်။
ဆည်မြောင်းဘက်က ဝန်ထမ်းတစ်ချို့ သောက်တယ်။ ရွာထဲက နည်းနည်းပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတစ်ချို့တစ်ခါတစ်လေသောက်တယ်။ ဧည့်သည်ရောက်တဲ့ အိမ်ကထွက်ဝယ်တာ ရှိတယ်။ ဒါပဲ၊ တစ်နေ့လုံးမှ ခွက်သုံးဆယ်မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့ ဆိုင်ကလေး။ နောက်တစ်ခုက ကိုအီကွန်းဆိုင်က လက်ဖက်ရည်တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖုန်တသောသော တက်နေတဲ့ ဘိလပ်ရည်လေး၊ ဂျာဂျင်ဘီယာလေး၊ ဝင်ကာနစ်ကလေးလည်း တင်ရောင်းတယ်။ တိုလီမုတ်စလေး၊ စုံစီနဖာ ရောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ ကိုအီကွန်းက ဒါနဲ့ စားနေတာ။
ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့သလိုပဲ။ တစ်နေ့ ခွက်သုံးဆယ်လောက်က လက်ဖက်ရည်ဖြစ်နေတက်ပြီး ကော်ဖီ သောက်တာက ချန်ထွန်းအောင်ပဲ ရှိတယ်။ ကိုအီကွန်းက တိုက်နယ်ကြီးရွာကို ကုန်သွားချိန်ရင် ကော်ဖီမှုန့် တစ်ထုပ် ဝယ်ဝယ်လာရတာ ချန်ထွန်းအောင်ဖို့ပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ကော်ဖီမှုန့်ထုပ်ကလေးဟာ မှိုတောင်တက်နေလောက်တယ်။ ကြာတော့ အနံ့အရသာတောင် မဲ့နေလောက်တယ်။
တစ်ခါတလေ တစ်ခါက ကော်ဖီမှုန့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်အနည်းအကျဉ်းကလွဲရင် ကော်ဖီမှုန့်ပါလို့ ပြောဖို့တောင် ခက်လောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုး။ ဒါပေမယ့် ရတယ်။ ချန်ထွန်းအောင်ကတော့ ရတယ်။ ကိုအီကွန်းဆိုင်မှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်တလေရနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေတာ။
မနက် တစ်ခွက်၊ ညတစ်ခွက် ကိုအီကွန်းဆိုင်ကကော်ဖီရနေသရွေ့ ဘဝဟာပြည်စုံနေတယ်လို့ သူ တွက်ထား ပြီးသား။ ကိုအီကွန်းကလည်း တရုတ်နှစ်သစ်ကူးတောင် မပိတ်တဲ့ဆိုင် ဆိုတော့ ညံ့ကာမှသာ ညံ့ရော၊ ကော်ဖီကတော့ ရနေတာ မဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ကိုအီကွန်းရဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ကော်ဖီနဲ့ ချန်ထွန်းအောင် မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတယ်။
တစ်နေ့ ချန်ထွန်းအောင် အိမ်ကို ဆည်မြောင်းက အလုပ်သမားလေးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ လက်ထဲမှာ ပလတ်စတစ်ခွက်ကလေးတစ်လုံး ပါလာတယ်။ ချန်ထွန်းအောင် မိန်းမကတော့ တစ်ဖက်ခြံက ဆည်မြောင်း ဘိုတဲမှာ ထမင်းချက်တဲ့ ကောင်လေးမှန်း သိတယ်။ ကောင်လေးက ဘာမှမပြောဘဲ ချန်ထွန်းအောင်ကိုပဲ ရှာတယ်။
“ဟဲ့ လာ၊ မင်း ဦးလေးရှိတယ်။ ဘာလဲ ပြောလေ”
“စားစရာပေါ့ဗျ၊ ဆည်မြောင်းဘိုကြီး မိန်းမက ပေးခိုင်းလိုက်လို့”
ဇီးချဉ်ကုန်းရွာသားများက ဆည်မြောင်းက အင်ဂျင်နီယာတွေကို ဆည်မြောင်းဘိုကြီးလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ရှိတဲ့ ဆည်မြောင်း အင်ဂျင်နီယာတွေ နေတဲ့ ဘန်ဂလိုကို ဘိုတဲလို့လည်း ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ဘိုတဲနဲ့ ခြံချင်းကလည်း ကပ်နေတော့ ခိုင်းစရာရှိရင် သူတို့ လင်မယားကို ခေါ်ခိုင်းလေ့ ရှိတာ။
သည်လိုပဲ မကြာခဏ ဟိုဟာလေး လာပေး၊ သည်ဟာလေး လာပေး လုပ်တတ်တာ ရှိတယ်။ သည်တစ်ခါတော့ ခွက်ကလေး တစ်လုံးနဲ့ လာပေးတာဆိုတော့ ထူးဆန်းနေတယ်။ ဘာပါလိမ့်ပေါ့လေ။ သည်မှာတင် ချန်ထွန်းအောင်လည်း အိမ်ရှေ့ကို ထွက်လာတယ်။ ခွက်ကလေး တစ်လုံးနဲ့ ရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးကို တွေ့သွားတယ်။
“ကာဖီ လို့ ထင်တာပဲ၊ ဘိုကတော် ပေးခိုင်းလို့”သူတို့ရွာမှာ ကော်ဖီကို ကာဖီလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီဆိုကတည်းက ချန်ထွန်းအောင် ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘူး။ ခွက်လွတ်တစ်လုံးရှာပြီး လှယ်ယူလိုက်တယ်။ ကောင်လေး ပြန်သွားတော့ အိမ်ရှေ့ကွပ်ပျစ်မှာပဲ ဘိုကတော့် ကော်ဖီကို သောက်တယ်။
ကြည့်စမ်း…. ဒါ ဘာကော်ဖီလဲ၊ သည်ကော်ဖီမျိုး ဘယ်တုန်းက ပေါ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေ တီထွင်တားသလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေက သောက်နိုင်တာလဲ၊ သည်ကော်ဖီမျိုး ပေါ်နေတာကို နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်တွင်းမှာ ဒါ သူ ပထမဆုံး သိလိုက်တာပဲ။ သူဟာ ကော်ဖီကို ကုန်သွားမှာဆိုးတဲ့ ပုံနဲ့ အာစွတ်ရုံပဲ သောက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းလေး စိုရုံပဲ စွတ်ပြီး လျှာနဲ့လျက်တယ်။ လျက်လိုက်တိုင်းလည်း သူ့တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောအခြင်တွေဟာ ဖျဉ်းခနဲ ဖျဉ်းခနဲ အငွေ့တွေ ထွက်သွားသလို ခံစားနေရတယ်။ သူ့ရင်ထဲမှာ မေးခွန်းတွေ စီကာစဉ်ကာ ဖြစ်ပေါ်နေပေမယ့် သူ့မှာ အဖြေမရှိဘူး။
သူဟာ ကော်ဖီကုန်သွားတာတောင်ခွက်ကိုကိုင်ရင်းငိုင်နေလိုက်တာ တစ်မနက်ခင်းလုံးပဲ။ ကိုအီကွန်း ဆိုင်ကိုလည်း မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ သည်မနက်တော့ သွားဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးကိုး။ ကိုအီကွန်းဆိုင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာသောက်လာတဲ့ ကော်ဖီဟာ လက်စသတ်တော့ အင်မတန် ညံ့ဖျင်းတဲ့ ကော်ဖီ ပါကလား။
မနက် တစ်ခွက်၊ ညဦး တစ်ခွက် ဝတ်မပျက်သောက်လာတဲ့ သည် ကော်ဖီဟာ လက်စသတ်တော့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ အော်ဂလီဆန်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီမျိုး ပါလား။ လူဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်တက်တဲ့ သတ္တဝါ မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ကိုအီကွန်းကို သူ အပြစ်တင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကနေ့ မနက်သောက်လိုက်ရတဲ့ ကော်ဖီမရှိခင်က ကိုအီကွန်း ကော်ဖီဟာ ကော်ဖီပဲ မဟုတ်လား။ ကနေ့မနက် သောက်ရတဲ့ ကော်ဖီမျိုးဟာ နေ့စဉ်ဘယ်မှာ ရနိုင်ပါ့မလဲ။ သူတစ်ခုတော့ ဝမ်းနည်းသွားတယ်။ သည်မနက် သောက်လိုက်ရတဲ့ ကော်ဖီမျိုး နောင် သူ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သောက်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ အသိကြောင့်ပဲ။
“ငါ ဘိုတဲကို သွားဦးမယ်ဟေ့။ ဒါ ဘာကာဖီလဲ၊ ငါ သွားမေးဦးမယ်”
သည်မိန်းမကို အော်ခဲ့ပြီး ခွက်ကို ကိုင်ရင်းနဲ့ပဲ ခြံစည်းရိုးကို ခွကျော်ပြီး ဘိုတဲဘက်ကို ထွက်လာတယ်။ ဆည်မြောင်းဘိုကြီးကိုတော့ မတွေ့ရဘူး။ မြောင်းကျိုးတဲ့ဆီကို သွားစစ်နေတာနဲ့တူတယ်။ ဘိုကြီးကတော်က ဧည့်သည်တွေ အများကြီးနဲ့ စကားပြောနေတယ်။ အထုပ်တွေ အပိုးတွေလည်း တွေ့တယ်။
သူဝင်လာတာ တွေ့တော့ လှမ်းမေးတယ်။ ပထမတော့ ဧည့်သည်တွေ ရှိတော့ သူ မေးဖို့ တွန့်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ မေးဖို့လာတာပဲ၊ မေးရတယ်။ ဒါ ဘာကော်ဖီလဲ သူ သိချင်နေတာ မဟုတ်လား။
“သြော် အခုန ငမှုန်လာပေးတာ ဘာကာဖီလဲလို့ပါ”
“သြော် အေး မင်း ကော်ဖီကြိုက်မှန်းသိလို့ဟဲ့၊ ငါ ပို့ခိုင်းလိုက်တာ။ အဖေတို့ မြို့က ပါလာတာ၊ နက်စ်ကော်ဖီလို့ ခေါ်တယ်”
ဟုတ်ပါပြီ။ နတ်ကာဖီပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ နတ်များ၊ သိကြားများ သောက်တဲ့ ကာဖီဟာ နတ်ကာဖီပေါ့။ ချန်ထွန်းအောင်ဟာတော်တော်ပျော်သွားပုံလည်းရတယ်။ သည်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ သူ့ကို နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်နုပျိုသွားစေတယ်။ သူဟာဝမ်းသာအားရ သူ့အိမ်ကလေးဆီကို ပြန်လာတယ်။
“မကြည် အခုန ငါသောက်တာ ဘာကာဖီလဲ သိလား”
ချန်ထွန်းအောင်က နတ်ကာဖီအကြောင်းကို တစ်အိမ်ချင်း လိုက်ပြောတယ်။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ သူတိုင်းကို ပြောတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က ကိုသန်းကို ပြောတယ်။ အကြော်ဆိုင်က ဒေါ်ကြီးစိုးကို ဝင်ပြောတယ်။ ကြံရည်ဆိုင်က ဘာဘူကို ဝင်ပြောတယ်။ စက်ဘီးပြင်ဆိုင်က ဦးလေးပေါ်ကို ဝင်ပြောတယ်။
ပြောခဲ့သမျှ လူတွေဟာ စိတ်ဝင်စားဟန် မပြဘူး။ ကိုယ်မသောက်လိုက်ရတဲ့ ကော်ဖီ တစ်ခွက်အကြောင်းကို ဘယ်သူက စာစာနာနာ နားလည်နိုင်ပါ့မလဲ။ နောက်ဆုံး ကိုအီကွန်းဆီကို သူ ဝင်တယ်။ နတ်ကာဖီအကြောင်း မြန်ရေရှက်ရေ ပြောတယ်။ ကိုအီကွန်းကလည်း အင်းမလှုပ် အဲမလှုပ်ပဲ။
ကော်ဖီသာရောင်းတာ၊ ကိုအီကွန်းကိုယ်တိုင် ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်သောက်တာ မဟုတ်တာက တစ်ကြောင်း၊ သည်နတ်ကာဖီဆိုတာကို သူ ကြားလည်း မကြားဖူး၊ သောက်လည်း မသောက်ဖူးတာက တစ်ကြောင်း ဆိုတော့ ချန်ထွန်းအောင် ပြောနေတာကို သူ နားမလည်ဘူး။ ချန်ထွန်းအောင် ပြန်လာတော့ သူ့မိန်းမက ထမင်းခူးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ မစားတော့ဘူး။
သူ့ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့၊ သူ့အာရုံခံစားမှုမှာ ပျောက်ကွယ်မသွားသေးတဲ့ ကော်ဖီရဲ့ ရနံ့နဲ့ အရသာကို သူ အပျောက်မခံနိုင်ဘူး။ သည်လိုနဲ့ ညရောက်လာတယ်။ သူ ကော်ဖီ ဝယ်ရတော့မယ်။ ကော်ဖီ သောက်ရတော့မယ်။ ဘိုတဲက နက်စ်ကော်ဖီလိုမျိုး သူ နောက်တစ်ခွက် ဘယ်မှာ ရနိုင်မှာတုံး။
ဇီးချဉ်ကုန်းကို ရှားရှားပါးပါး ရောက်လာတဲ့ နက်စ်ကော်ဖီဟာ ဘာနဲ့ထည့်ထားတာလဲဆိုတာတောင် မသိတဲ့ဟာ။ နောက်တစ်ခွက် သောက်ရဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ သည်တော့ သူသောက်နေကျ ကိုအီကွန်းရဲ့ ပျစ်ချွဲချွဲ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို သူ ဝယ်ရတော့မယ်။ ဝယ်ပြီးရင် သူ သောက်ရတော့မယ်။ သူ တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ ဝယ်တာပါပဲ။ ဝယ်ပြီးတော့ သူ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ မသောက်ဖြစ်ဘူး။ သူ ရင်တွေ ခုန်လာတယ်၊ မျက်လုံးတွေ ကြောင်လာတယ်။ အာတွေ လျှာတွေ စိုစွတ်လာတယ်။ ဘယ်လိုမှကို မရနိုင်မှန်းသိတော့မှ သူ ကိုအီကွန်းရဲ့ ကော်ဖီကို တစ်ကျိုက်ကျိုက်ချလိုက်တယ်။ ထွီး…. ကြည့်စမ်း နံလိုက်တာ၊ မကောင်းလိုက်တာ၊ အဝင်ဆိုးလိုက်တာ၊ အန်ချင်လိုက်တာ၊ နောက်တစ်ကျိုက် မဖြစ်တော့ဘူး၊ သူ ဘယ်လိုမှကို မသောက်နိုင်တော့ဘူး။
သူ့မျက်လုံးထဲမှာ မနက်က ကော်ဖီခွက်ကိုပဲ မြင်နေတယ်၊ မနက်က အရသာကိုပဲ တပ်မက်နေတယ်။ သူ့လက်ထဲက ကော်ဖီခွက်ထဲမှာ ကော်ဖီတွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။သူ တစ်ကျိုက်ထပ်သောက်ကြည့်တယ်။ လည်ချောင်းထဲကို ဝင်သွားတဲ့ တော့ကော်ဖီ အေးစက်စက်ဟာ သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့သွားစေတယ်။
အေးစက်နေတဲ့ ကော်ဖီကို သောက်နေပေမယ့် သူ့မှာ ချွေးတွေ ရွှဲနစ်လာတယ်။ ရင်တွေ ပူလာတယ်။ ညှီစို့စို့၊ အောက်စော်နံတဲ့ ကော်ဖီအနံ့ ဟာ သူ့ကို တဆတ်ဆတ် တုန်ရီစေတယ်။ တော်တော်ညဉ့်နက်တော့မှ သူ ချောက်ချောက်ချားချား အိပ်ပျော်သွားတယ်။
အိမ်မက်ထဲမှာ ပြောင်ပြောင် ပြောင်ပြောင်နဲ့ နတ်သားတစ်ပါးဟာ သူ့ကို ရွှေစင်ခွက်နဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက် လှမ်းပေးတာကို သူ သောက်ရတယ်။ သူဟာ နတ်သားပေးတဲ့ ကော်ဖီကို သောက်ရင်း ပြုံးတယ်။ ပြီးတော့ နတ်သားကို ရွှေခွက် ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ အလို….. အိမ်မက်ထဲက နတ်သားဟာ လက်စသတ်တော့ ဆည်မြောင်းက အလုပ်သမားလေး ငမှုန်ပါလား။
နောက်တစ်နေ့က စပြီး ချန်ထွန်းအောင် ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ နက်စ်ကော်ဖီကို သူ စွဲလမ်းနေပြီ။ ဒါမျိုးကို တစ်သက်လုံး သောက်နေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ခက်တာက တစ်သက်လုံး နေနေသာသာ နောက်တစ်ခွက် သောက်ရဖို့တောင် မလွယ်ဘူးလေ။ ဒါမျိုး ကော်ဖီက တိုက်နယ်အဆင့် ရွာကြီးဖြစ်တဲ့ ကျောင်းစုမှာတောင် ရှိတယ်လို့ သူ မကြားဖူးဘူး။ နောက်တစ်ခုက အဲသလို ကော်ဖီမျိုး မသောက်ရတော့တာကလည်း ပြဿနာပဲ။
ညကတင် မဟုတ်ဘူး၊ မနက်ဘက် ကိုအီကွန်းဆိုင်က ကော်ဖီကို သောက်တော့လည်း ပျို့တာပဲ။ သည်လိုနဲ့ သူ ထမင်းပါ မစားနိုင် ဖြစ်လာတယ်။ သည်လိုနဲ့ သူဟာ ဘယ်ကော်ဖီမှ သောက်လို့ မဖြစ်တဲ့အခါ ထမင်းပါ မစားချင် မသောက်ချင် ဖြစ်လာတယ်။ သည်လိုနဲ့ သူဟာ အိပ်ရာထဲ လဲတယ်။ ပါးစပ်က “နတ်ကာဖီ…. နတ်ကာဖီ” လို့ပဲ အော်နေတော့တယ်။
သူ့မိန်းမကလည်း သူ့ယောက်ျား နတ်ကာဖီကို စွဲလမ်းရင်း မစားနိုင် မသောက်နိုင် ဖြစ်နေတာ သိပေမယ့် သည်ကာဖီမျိုး ဘယ်မှာ ထွက်ရှာမလဲ။ သူ တတ်နိုင်တာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဘိုတဲ သွားပြီး ဆည်မြောင်းဘိုကြီး မိန်းမကို နောက်ထပ်တစ်ခွက်လောက် တိုက်ပါဦး၊ သည်လို သည်လို ဖြစ်နေလို့ပါ ဆိုရင်ရနိုင်တယ်လို့ သူ တွက်တယ်။ သည်လိုနဲ့ သူ တစ်ဖက်ခြံကို ထွက်ခဲ့တယ်။ အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြတယ်။
“အစ်မ၊ နတ်ကာဖီ ရှိသေးလား”
“ဟဲ့ အဲဒါက ငါတို့ သောက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ဧည့်သည်တွေ မြို့ က ပါလာတာ။ ပုလင်းထဲမှာ နှစ်ခွက် သုံးခွက်စာတော့ ရှိဦးမယ်။ သည်လို လုပ်လေ၊ မနက်ဖြန် ဧည့်သည်တွေ ပြန်တော့မှာ။ ငါတို့ မိသားစုလည်း လိုက်သွားမှာ၊ ခြံလည်း ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ ရော့ ပုလင်းယူသွား”
“ဘယ်လို ဖျော်ရတာလဲ အစ်မ”
“ဟဲ့ ရေနွေးတည်ပြီး ဆူရင် တစ်ခွက်စာ မှန်းပြီး ဖျော်ပေါ့။ တစ်ဇွန်းခွဲလောက် ထည့်ပြီး ခလောက်ပေါ့။ အချိုကြိုက်ရင် သကြား နည်းနည်း ထည့်ပေါ့”
ချန်ထွန်းအောင် မိန်းမဟာ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ရေနွေးတည်တယ်။ တစ်ခွက်စာ ဖျော်တယ်။ ချန်ထွန်းအောင်ကို တိုက်တယ်။ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်အတွင်းမှာ ချန်ထွန်းအောင် သူ့မိန်းမကို သည်တစ်ခါ ကျေးဇူး အတင်ဆုံးပဲ။ သိလည်း သိသာတယ်။ သူဟာ ချက်ချင်း အားအင်တွေ ပြည့်ဖြိုး လာတယ်။ လန်းဆန်းလာတယ်။ ငယ်စိတ်တွေတောင် တစ်ဖျက်ဖျက် ပေါ်လာတယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ သည်ပုလင်းလေးကိုပဲ တကိုင်ကိုင် လုပ်ရင်း မဝတမ်း ကြည့်နေတယ်။
“ဒါမျိုး တစ်ပုလင်း မြို့ကို မှာရင် ရမှာပဲကွ”
“ဈေးကြီးမှာပေါ့တော်၊ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုမှာမလဲ။ မြို့ဆိုတာ အဝေးကြီး”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့တော့ မှာရမှာပါပဲ။ ဒါ မသောက်ရရင် ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး”
“တော်ကလည်း တစ်သက်လုံး ကိုအီကွန်း ကော်ဖီ သောက်လာတာ၊ သောက်ပါတော့လား။ ဒီ နတ်ကာဖီနဲ့ ကျုပ်တို့နဲ့ မတန်ပါဘူးတော်”“ဘာဖြစ်လို့ မတန်ရမှာလဲ။ ကိုအီကွန်း ကာဖီကို ငါမသောက်ချင်တော့ဘူး။ သောက်လို့ လည်း မရဘူး။ နတ်ကာဖီမှ ပုံမှန် မသောက်ရရင် ငါ သေလိမ့်မယ်”
“သေရင်လည်း သေဖို့ပဲ ကိုရင်ရေ့၊ ဘယ်က ရမှာတုံး။ အခုတောင် နှစ်ခွက်စာကို ဆယ်ခွက်စာလောက် ဖြစ်ရုံ၊ အနံ့ပါရုံ ဖျော်တိုက်နေတာ။ မနက်ဖြန်ဆို ကုန်ပြီ”
ချန်ထွန်းအောင် တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ တကယ်လည်း ပုလင်းထဲမှာ ကုန်တော့မယ်။ ဒါကုန်ရင် ဘယ်ကမှ မရနိုင်တော့ဘူး။ ကိုအီကွန်း ဖျော်ခုံ ဘယ်ဘက်ထောင့်က ကော်ဖီမှုန့် ခါးတူးတူး အောက်တောက်တောက်ကို သူ ပြန်သောက်ရတော့မယ်။ မသောက်နိုင်ဘူး၊ ဘယ်လိုမှ မသောက်နိုင်ဘူး။ သူဟာ နက်စ် ကော်ဖီပုလင်းကို တအားဆုပ်ထားတယ်။ ပုလင်းအဖုံးက စွဲနေတဲ့ အနံ့ကို အားပါးတရ ရှူတယ်။
သည်လိုနဲ့ ချန်ထွန်းအောင်ဟာ နက်စ်ကော်ဖီ ပြတ်သွားတဲ့နေ့က စပြီး အိပ်ရာထဲမှာ ပြန်လဲတယ်။ ပုလင်းကိုပဲ ပွတ်သပ်နေရင်းက အိပ်ရာထဲမှာ လူးလှိမ့်နေတာက သုံးရက်၊ ကယောင်ကတမ်း အော်နေတာ နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်လာတော့ သူ့မိန်းမဟာ ကိုအီကွန်းဆိုင် ပြေးတယ်။ ကိုအီကွန်းကို အကျိုးအကြောင်း ပြောတယ်။
မဖြစ် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရှာပေးဖို့ ပြောတယ်။ တစ်သက်လုံး မပိတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ဆိုင်ကို ပိတ်ပြီး မြို့ကို နက်စ်ကော်ဖီ တက်ရှာမယ်လို့ သူ ကတိပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကော်ဖီတစ်ခွက် ကောင်းကောင်းလေး ဖျော်ပြီး ချန်ထွန်းအောင် မိန်းမနဲ့ လိုက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်လာတော့ ချန်ထွန်းအောင်က သေနေပြီ။
လက်တစ်ဖက်က နက်စ်ကော်ဖီပုလင်းကို လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း သေတာ။ ချန်ထွန်းအောင် မိန်းမကတော့ ရင်ဘတ်စည်တီးပေါ့။ ကိုအီကွန်းကလည်း ပါလာတဲ့ ကော်ဖီလေး ချန်ထွန်းအောင် ခေါင်းရင်းမှာ ထားလိုက်ရတော့တယ်။ ပြီးတော့ သေသူ့လက်ထဲက ပုလင်းကို ဆွဲယူတယ်။ မရဘူး။ ချန်ထွန်းအောင်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေက နက်စ်ကော်ဖီ ပုလင်းကို ဘယ်လိုမှ မလွှတ်ဘူး။
မသေခင် ဘယ်လောက်အားနဲ့ ဆုပ်ထားသလဲ မသိဘူး။ ဘယ်လိုမှကို ခွာထုတ်လို့ မရဘူး။ လာသမျှ၊ သတင်းမေးသမျှ လူတွေလည်း ခွာကြတာပဲ။ လက်ချောင်း လက်ဆစ်တွေ ကျိုးခါမှ ကျိုးရော၊ ပုလင်းကို ခွာထုတ်လို့ မရဘူး။ သည်တော့ ပုလင်းကို ဆုပ်လျက်သားနဲ့ပဲ ခေါင်းသွင်းတယ်။ သည်အတိုင်းပဲ မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုလ်ရတော့တယ်။
သည်ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ကြာခဲ့တဲ့ တစ်နေ့။ ဇီးချဉ်ကုန်း သင်္ချိုင်းမှာ နွားကျောင်းသား တစ်ယောက်ဟာ သင်္ချိုင်းထဲမှာ နွားကျောင်းရင်း အသားတွေ မရှိတော့တဲ့ ပြုတ်ထွက်နေတဲ့ လူ့ လက်ဖျံရိုး တစ်ချောင်းကို သွားတွေ့တယ်။ ထူးဆန်းတာက လက်ဖျံရိုးရဲ့ အဆုံးမှာ အရိုးစုဖြစ်နေတဲ့ လက်ချောင်းတွေဟာ ပုလင်းတစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာပဲ။ နွားကျောင်းသားက ပုလင်းကို လိုချင်လို့ ဆွဲယူလိုက်ပေမယ့် လက်ဖျံရိုးကြီး တစ်ချောင်းလုံးပါ ပါလာတယ်။
လက်ချောင်းတွေ ကြားထဲက ပုလင်းကို တအားညှစ်ပြီး ဆုပ်ထားတုန်းပဲ၊ မလွှတ်တမ်း ကိုင်ထားတုန်းပဲ။ သည်သတင်း ရွာထဲရောက်လာတော့ သည်လက်ဖျံရိုးဟာ ချန်ထွန်းအောင်ရဲ့ လက်ဖျံရိုးပဲ ဆိုတာ ရွာက သိတယ်။ ဇီးချဉ်ကုန်း သင်္ချိုင်းမှာ ချန်ထွန်းအောင်ရဲ့ လက်ဖျံအရိုးစုဟာ နက်စ်ကော်ဖီ ပုလင်းကို မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားဦးမှာပဲ။ ဇီးချဉ်ကုန်းရွာထဲက ကိုအီကွန်း သားတွေရဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ နက်စ်ကော်ဖီ ရနေပြီ၊ မာလ်တိုဗာ ရနေပြီ။ မိုင်လို ရနေပြီ။ ဟောလစ်ရနေပြီ။ တီးမစ်စ်၊ ကော်ဖီမစ်စ်တွေ ရနေပြီ။ ဘာသောက်ချင်သလဲ၊ အကုန်ရနေပြီ။